Israel inoronga kuvhura rwendo rwekunze kune vachengeti vekunze
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kuputsa Israel Nhau » Israel inoronga kuvhura rwendo rwekunze kune vachengeti vekunze
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Israel Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Israel kutanga kutambira mapoka akabaiwa majekiseni evafambi vekunze kudzoka munyika
Israel iri kutora nhanho huru mukuvhurazve kwekushanya kwenyika dzakawanda muna Chivabvu
Iwo akateedzana ezvikamu uye nhungamiro zvicharondedzerwa uye kuburitswa svondo rinouya
Muzvikamu zvese, vashanyi vanofanirwa kuitiswa bvunzo dzePCR vasati vakwira ndege yavo kuenda kuIsrael, uye bvunzo yeseroloji kuratidza hutachiona pavanosvika kuBen Gurion Airport
The Israel Ministry of Tourism, pamwe chete nebazi rezvehutano, yakazivisa kuti musi wa23 Chivabvu, nyika ichatanga kutambira mapoka akabayiwa majekiseni evashanyi vekunze kudzoka munyika kuburikidza neyakagadziriswa nzira mushure megore rinopfuura vasina kushanya nekuda kwezvirambidzo zveCOVID-19.
"Ndiri kufara kugovana nhau kuti Israel iri kutora matanho makuru mukuvhura zvekare kushanya kwenyika dzakawanda muna Chivabvu," akadaro Eyal Carlin, Tourism Commissioner weNorth America. “Tange tichishanda kuti titange chirongwa chinotendera kuti nyika ivhure kuvashanyi chete, asiwo kuona kuti munhu wese anogara akachengeteka. Tauya kusvika zvino, uye ndosaka tiri kugadzirisa ino nzira yekuita yekuvhurwa kwakapetwa. 60% muzana yevagari vemuIsrael vakabayiwa majekiseni uye neUnited States neIsrael vachishandisa majekiseni mamwe chetewo, tinotarisira kuti panosvika mwaka wezhizha tinokwanisa kuvhura mikova yedu nekugamuchira mushanyi wese kuIsrael angade kuuya. ”
Iwo akateedzana ezvikamu uye nhungamiro zvicharondedzerwa uye kuburitswa svondo rinouya. Chikamu chekutanga chichava nehurongwa hwekuchaira huchaita muna Chivabvu 23, zvichibvumira huwandu hwesarudzo yemapoka ekushanyira Israeri - huwandu hwemapoka huchawedzera zvichibva pahutano hwese uye kufambira mberi / kubudirira kwechirongwa. Vafambi vega vanozogamuchirwa muchikamu chinotevera chekuvhurazve muna Chikunguru (TBD). Muzvikamu zvese, vashanyi vanofanirwa kuitiswa bvunzo dzePCR vasati vakwira ndege yavo kuenda kuIsrael, uye bvunzo yeseroloji kuratidza hutachiona pavasvika Ben Gurion Airport. Zvichakadaro, nhaurirano dzicharamba dzichiwana zvibvumirano zvejekiseni-chitupa chekusimbisa, nechinangwa chekudzima kudiwa kwekuyedzwa kweserological.